UVictor Rice Mill osebenzayo kunye nevidiyo yokusebenza
Umatshini wokutshabalalisa iirayisi
Umatshini weRice Grader
Umatshini wokupakisha iilayisi
ividiyo yomatshini weerayisi
Olu luhlu lomatshini welayisi yerayisi lisetyenziswa ikakhulu ukwahlula amatye kwi-paddy ecocekileyo, ingqolowa. Ifakwe ngemoto ezihamba zimbini ezijikelezayo, ibonisa imveliso ephezulu, Umgangatho omkhulu kunye ne-sepa ……
indleko zokulungisa irayisi
Njengokutya okwaziwa kakhulu emhlabeni, Ilayisi ityalwa ngokubanzi. Nangona kunjalo, paddy ayinakutyiwa ngohlobo lwayo eluhlaza kwaye ifuna ukwenziwa. Iingqayi zerayisi kule mihla zakhiwe ngumbuso we-tec ...
umatshini welayisi i-husker uyathengiswa
Umatshini welayisi we-husker wenzelwe ukuba wahlukane ne-paddy kwirayisi e-brown kunye ne-paddy kumgaqo-siseko we-density.this irayisi ye-husking yomatshini inokuxhotyiswa ngomnye umatshini we-paddy irayisi ye-husker,A …………………
umatshini omncinci wokugaya irayisi
oomatshini abancinci bokugaya irayisi benzelwe ukubonelela ngesivuno esiphezulu kunye nengeniso kumatshini wokugaya irayisi. Izisombululo zethu zokuphelisa irayisi zinciphisa inkcitho kwinkqubo, manp
umatshini wenjini yedizili
Le mveliso uyilo lwabathengi abaqhele ukuhambisa ukuqhubekeka nokutyumza ngaxeshanye oomatshini bokulungisa ukutya ngokudibeneyo badibanise umatshini weerayisi umdaka uneempawu …………………
Khetha ulwimi lwakho EnglishAfrikaansالعربيةမြန်မာစာWikang FilipinoFrançaisDeutschहिन्दी; हिंदीItaliano日本語한국어PortuguêsEspañolKiswahiliภาษาไทยTürkçeTiếng ViệtisiXhosaisiZulu
Ukusetyenziswa komatshini wokukhetha imibala kwindawo yokugaya irayisi
Ukuseka ishishini lokugaya irayisi ePhilippines
Misela iprojekthi yokutyala yonke ingqolowa
Ungatyala njani ngempumelelo irayisi ye-paddy
© 2012--2021 UVictor Rice Mill uGcina onke amaLungelo
Yenziwe nguVictor Rice Mill Iqela